Maalinta: Ogast 17, 2019
TCDD ma aysan qaadin hilib allabari
Ciidul Adxa diraya fariimaha bulk rakaabka Safraan Jamhuuriyadda Turkey Tareennada State (TCDD), uma ay oggolaan gaadiidka tareenka-xawaaraha sare ee hilibka iyo wax allabari. Sida uu sheegayo warkii Serkan Alan ee Wargeys Jaale; [More ...]
Dadka deggan Batman waxay ku adkaysanayaan Raybus
Dadka Batman waxay rabaan inay beddelaan shabakadda tareenka ee jira, oo firfircoon oo firfircoon oo ku taal wadada tareenka Batman-Diyarbakır, halkaas oo qiyaastii 15 kun oo qof ay maalin walba u safraan, si ay ugu qaadaan tareenka. Gaadiidka Raybus ee Wargayska Sonsöz [More ...]
Dhibaatada taraafikada ee Denizli waxaa lagu xalliyaa Smart Intersections
Dawlada Hoose ee Magaalada Denizli waxay sii wadaysaa inay si dhaqso leh taraafikada ugaga dhigto isgoysyada caqliga leh. Wadada Cali Dartanel ee ku taal isgoyska Magaalada Caasimadda ah ee 2 ayaa xallisay dhibaatada taraafikada ee gobolka. Denizli [More ...]
Wadada aan la furin ee Adana
Waaxda Adult Metropolitan waaxda cilmiga ee Waaxda Laanta Wadooyinka PTT Guryaha Orkide Wadada laamiga ah ayaa la qabtay. Waaxda Adhi Magaalaga Magaalo Weyn ee Sayniska Shaqooyinka Waaxda Laanta Wadooyinka PTT [More ...]
Mersin sidoo kale wuxuu raadinayaa sida ugu wanaagsan xagga gaadiidka
Dowladda Hoose ee Magaalada Mersin waxay sii wadaysaa dadaalkeeda si ay u xalliso dhibaatooyinka ka jira gaadiidka dadweynaha isla markaana kor loogu qaado tayada iyada oo aan hoos loo dhigin. Maamulka magaalada ayaa la kulmay wakiilo ka socda waaxda. [More ...]
Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli ayaa ku dhawaaqday tiro basas ah iyo taraamyo bilaash ah oo ku saabsan Iiddii Allabari inay ku yimaadeen lambar la duubay. Basaska iyo Akçaray Tram waxay u keeneen muwaadiniinta meeshii ay rabeen inay aadaan iyagoo si firfircoon uga shaqeynaya. dhibbanaha [More ...]
Maanta taariikhda: 17 August 1869 Hirsch, Porthole
Maanta Taariikh 17 August 1869 Hirsch, shirkad cusub ayaa loo abuuray si loogu badalo shirkadda porthole. Talabot, oo ahaa hoggaamiyihii hore ee Lombar, ayaa loo doortay booskiisa sababtoo ah danaha uu u fidiyay isaga.